အကောင်းဆုံးကိုအိတ်ထဲ-size စမတ်ဖုန်းငါးခု - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကောင်းဆုံးကိုအိတ်ထဲ-size စမတ်ဖုန်းငါးခု” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 17 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဒီနှစ်မှာတော့စမတ်ဖုန်းများအတွက်သေးတာအကောင်းဆုံးခဲ့ပြီ, ပိုမိုအသုံးဝင် features တွေနှင့်အတူ, ပိုကောင်းဒီဇိုင်းများနှင့်အများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော software ကို. ဒါပေမယ့်လည်းထိပ်တန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုထိပ်တန်းဒေါ်လာစျေးကုန်ကျရန်မလိုပါနှင့်ကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းများအကြီးအကျယ် screens ကိုရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသက်သေပြခဲ့သောထိုနှစ်တွင်ခဲ့.
Sony Xperia Z5 ကို Compact
အဆိုပါ Sony Xperia Z5 ကို Compact ၏ 23-megapixel ကင်မရာသေး Sony ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
စျေးနှုန်း: £ 450
Sony ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သေးငယ်တဲ့ဖုန်းကိုကအာဏာအရှိဆုံးသေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းသည်လက်ရှိရရှိနိုင်စေသည်ဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှု၌တစ်ဦး 4.6in screen ကိုရှိပါတယ်. တစ်ဦးကအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်လက်ဗွေစကင်နာဖုန်း၏လက်ျာတော်ဘက်မှာတနျခိုး button ကိုအောက်တွင်ဖုံးကွယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ device ကိုသော့ဖွင့်တဲ့အိမ်ကခလုတ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုသွင်းထားရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ.
အသစ် 23-megapixel ကင်မရာသေး Sony ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ငြင်းခုံဖွယ်တစ်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး. ဒါဟာအပိုသိုလှောင်မှုကိုဖြည့်စွက်သည် microSD card များကြာနှင့်ဖုန်း 1.5 ၏နက်နဲသောပင်လယ်မှရေစိုခံဖြစ်ပါတယ် 30 မိနစ်, ထို loo ကဆင်းတဲ့ခရီးစဉ်ကိုအဓိပ်ပာယျကမ္ဘာ၏အဆုံးသည်မဖြစ်သေး.
သို့သော်ထိုသို့လူသတ်သမားရဲ့ feature ကြောင်း၎င်း၏သုံးရက်ကြာဘက်ထရီသက်တမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤသည်လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်သောအရှည်ဆုံးရေရှည်တည်တံ့ High-end စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: အားကောင်းတဲ့, စွဲချက်အကြားသုံးရက်ပတ်လုံးကြာရေစိုခံစမတ်ဖုန်းကို
Sony Xperia Z5 ကို Compact ပြန်လည်သုံးသပ်: ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံးအသေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းကို
ထူးအိမ်သင်, အလင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း: Samsung ရဲ့ Galaxy S6. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
စျေးနှုန်း: £ 375
အဆိုပါ Galaxy S6 တစ် All-သတ္တုနှင့်ဖန်ထည်ကိုယ်နှင့် Samsung ရဲ့ပထမဦးဆုံးပရီမီယံ-feeling စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတက်ကယခုယှဉ်ပြိုင်ကိုက်ညီဆိုလိုသည်.
ဒါဟာလက်ရှိရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးခံစားချက်စမတ်ဖုန်းရဲ့, apps များအကြားဇီပ်လုပ်မျုနှင့်ဂိမ်းများမှတဆင့်မီးလောင်. ဒါဟာထွက်ရှိအကောင်းဆုံးတို့တွင်အကြောင်းကိုကြီးစွာသော 16-megapixel ကင်မရာရှိပါတယ်, တစ်စိတ်ကူး 5.1in 2K မျက်နှာပြင်, နှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ထက်ပိုမိုပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးရဲ့.
အိမ်တွင် button ကိုအောက်မှာတစ်ဦးကလက်ဗွေအာရုံခံဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုကိုစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါ. ဒါဟာအစတစျနေ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နှင့်လုံလောက်တဲ့ဘက်ထရီကိုရတယ်င့်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: ကိုယ့်လျှောက်ရှိ zips သောအလျင်မြန်ဆုံးခံစားချက်ကစမတ်ဖုန်း
Samsung ရဲ့ Galaxy S6 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ကို iPhone လူသတ်သမား
Apple ၏ iPhone 6S
processor 70% မြန်မြန်, အသစ်ကလက်ညှိုးကိုပုံနှိပ် scanner ကို - ဒါပေမယ့်ဆင်းရဲသားကိုဘက်ထရီသက်တမ်းချ Apple ၏ iPhone 6S ပေးနိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: Kiichiro Sato / အေပီသတင်းဌာန
စျေးနှုန်း: £ 539
အဆိုပါ iPhone ကို 6S က Apple အနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ် 4.7in မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအသေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းများထဲကတစ်ခု. ဒါဟာအကြီးမားဆုံးသောအရောင်းရဆုံး feature ကိုဖွင့်တဲ့ဖိအားကိုအထိခိုက်မခံမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါသည်, သောတိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများကိုဖမ်းယူနိုင်မသစ်ကိုမူအယာများနှင့် 12-megapixel ကင်မရာခွင့်ပြု - ဆဲတစ်ချိန်တည်းမှာတိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ချက်နှင့်အတူစုစုပေါင်းလက်သည်.
အဆိုပါသတ္တုကိုယ်ခန္ဓာယခုခြစ်လျော့နည်းစေတဲ့ခက်လူမီနီယမ်၏ဖန်ဆင်းထားသည်. ဒါဟာ processor ကိုဖြစ်ပါတယ် 70% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်. Apple ရဲ့အသစ်က Touch ID လက်ဗွေစကင်နာနီးပါးချက်ချင်းဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏အသစ် Taptic အင်ဂျင်တုံ့ပြန်ချက်တုန်ခါနေတဲ့ကြီးမြတ် staccato ထုတ်လုပ်စဉ်.
iPhone ကို 6s ပြန်လည်သုံးသပ်: အမှိုကျဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့်ပျက်ပြီတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဖုန်းကို
Google က Nexus ကို 5x
က Nexus 5x အတွက်အဘယ်သူမျှမဖောင်းပွ. ဓါတ်ပုံ: ကို Justin Sullivan က / Getty Images
စျေးနှုန်း: £ 339
Google ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် Non-Phablet ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်, က Nexus 5x, လူကြိုက်များသောကြောင့် Nexus မှဆက်ခံဖြစ်ပါသည်5ကနေ 2013.
ဒါဟာကောင်းတဲ့ 5.2in screen ကိုရှိပါတယ်, ပါးလွှာခြင်းနှင့်အလင်းဖြစ်၏နှင့် Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို run ဖို့ပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 6.0 Marshmallow. အဆိုပါဖုန်း, Google အတွက် LG ကဖွငျ့, ပြေးရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးကရည်ရွယ်လမ်းကို Android, bloatware မပါဘဲနှင့်အရာအားလုံးထက်မီကဆော့ဖ်ဝဲကိုမွမ်းမံမှုများရလိမ့်မည်.
နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်လက်ဗွေအာရုံခံသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသော့ဖွင်နှင့်ငွေပေးချေမှုကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပေးတဲ့အဘို့သင့်လက်ညှိုးအောက်မှာသဘာဝကိုက်ညီ. ဒါဟာအစက USB အမျိုးအစား-C ကိုဆိပ်ကမ်းရှိပါတယ်, cable ကိုအားသွင်းဖို့ဖြစ်စေလမ်းဖွင့်ကိုပလပ်နိုင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်. ဘက်ထရီတစ်ရက်နှင့် ပတ်သက်. ကြာ, ဒါပေမဲ့မအများကြီးပို.
ဆုံးဖြတ်ချက်: အစာရှောင်ခြင်း, အလင်းနှင့်ဖောင်းလွတ်, Google ကရည်ရွယ်ပါသည်လမ်းကို
Google က Nexus ကို 5x ပြန်လည်သုံးသပ်: ထိုလူရဲ့ Android ဖုန်း?
Motorola က Moto G (2015)
ကံကောင်းတတိယအကြိမ် ... Motorola ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Moto G. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
စျေးနှုန်း: £ 145
Motorola ရဲ့တတိယမျိုးဆက် Moto G သေးအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်, အောက်£ 200 ခန့်များအတွက်အကောင်းဆုံး All-ပတ်လည်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်.
ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲက Android ဒါဟာ့လှစ်ထား, ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက် snappier နှင့်အခြေခံပိုင်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့. ဘက်ထရီကောင်းတစ်ဦးတနေကုန်, အလငျးကိုအသုံးပြုမှုကိုပိုမို, ထိုသို့စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်ကျောက်ကုန်းနှင့်အတူသိသာထူသောဖြစ်ခြင်းရှိနေပေမဲ့ကောင်းသောခံစားရ.
အဆိုပါ Moto G IP67 စံချိန်စံညွှန်းသို့မဟုတ်ဘို့ရေ၏ 1 မိနစ်မှရေစိုခံဖြစ်ပါတယ် 30 မိနစ်, သောသင်ရေချိုးအတွက်ကြောင့် drop သို့မဟုတ်မိုးရေထဲမှာဖမ်းမိလာလျှင်ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်.
ကင်မရာကအထက်-ပျမ်းမျှအားရိုက်ချက်များဖမ်းယူနိုင်စွမ်းပေမယ်လျှင်ပိုပြီးမှတ်ဉာဏ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် microSD card slot ပါရှိရဲ့ 8 သို့မဟုတ် 16GB Built-in လုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး.
Motorola က Moto G (3တတိယအကြိမ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်) ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အကောင်းဆုံးကိုဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းပဲပိုကောင်းတယ်
34831	1 ပန်းသီး, အပိုဒ်, computing, Google က, အင်တာနက်ကို, iPhone ကို 6s, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, Motorola က, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, Sony က, နည်းပညာ, တယ်လီကွန်း, ကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီး
← နယူးစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီအားကိုအားသွင်းနိုင် 48% ငါးမိနစ် အရက်ကယ့်ကိုအိပ်ရာ၌သင်တို့ကိုပိုကောင်းစေပါပါသလား? →